Wararka - Toddoba qurxinta darbiga hal-abuurka ah ayaa toosiya qolka fadhiga ee daalan
Toddoba qurxinta gidaarka hal-abuurka ah ayaa toosiya qolka fadhiga ee daallan
Adeegso qurxin hal abuur leh si aad u kiciso qolka fadhiga ee daalan. Beddel meel cidla ah oo madhalays ah adoo kudaraya qurxinta diiran ee caanka ah, kana dhigaysa qolka fadhiga meesha ugu soo jiidashada badan guriga. Alaab duug ah ka soo laalaadi dukaamada wax lagu gado ee ku yaal darbiyada shaashadda, ku dar gidaarka warqad qaabaysan, ama soo bandhig aruurinta qadiimiga ah - waxaa jira siyaabo aan la tirin karin oo lagu muujiyo shakhsiyaddaada isla markaana nolol muhiim ah ugu keento qolka fadhiga caajiska ah. Halkan waxaa ah 8 farsamooyin qurxin fudud oo ka dhigi kara qolka fadhiga meesha ugu caansan ee lagu kulmo ee guriga.
01 Darbiga ku xir qaabka aad jeceshahay
Waraaqda ubaxa ayaa noqotay barta laga bilaabo qolka fadhiga dhalaalaya. Dahaarka buluugga iyo caddaanka ah iyo farshaxannada midabbada dhalaalaya ayaa si wada jir ah loogu qaabeeyey tones dheellitiran si boos loogu noolaado.
02Dusplay daahyada darbiga qadiimiga ah
Ku laadlaadinta darbiga qaab qaraami ah ee derbiga ku dheggan ayaa beddelaya cidlada iyo madhalaysnimada waxayna ka dhigeysaa booska mid horumarsan
03 Diyaarso meel carruurta saaxiibtinimo leh
Meel carruurta ka mid ah, madaxyada muunad-gacmeedka dadku sameeyeen waxay ku darsadaan shakhsiyado xiiso leh derbiyada cad. Sawir gacmeed ayaa lagu dhejiyay derbiga ku xiga, oo soo bandhigaya sawirro qiiro leh iyo daabacado.
04 Isticmaal qurxinta kale
Waa wax aad qaali u ah in lagu daboolo qolka fadhiga oo dhan iyadoo lagu dhejinayo gidaar qaali ah Daboolka gidaarka waxaa loo isticmaali karaa meelaha qaarkood si loo abuuro dareen nadiifsan oo boos.
05 Soo bandhig qurxinta macnaha leh
Waa ikhtiyaar wanaagsan in la doorto waxqor ama sawir gacmeedyo macno leh oo lagu dhejiyo derbiga qolka fadhiga.
06 Samee meelaha lagala xiriiro inta udhaxeysa farshaxanka
Waxaad ku dari kartaa alaabada qadiimiga ah booska, oo leh qaab dhismeedka darbiga hore, miisaska, kuraasta, iyo qurxinta qurxinta qaarkood.
07Ka dhig darbiga mid soo jiidasho leh
Farshaxanistaha Dana Gibson ayaa tiri, "Ma jecli darbiga qallalan, illaa iyo inta aan ka dhigayo mid xiiso badan, waxaan diyaar u ahay inaan sameeyo wax walba." Ku qurxinta booska qurxinta badan sidoo kale waa xulasho wanaagsan.
Aagga Maalgashiga Ganacsiga Fujian, Degmada Anxi, Gobolka Fujian, Shiinaha 362400
Sideed talooyin qurxin qurux badan si ay kaaga dhigaan ...
Toddoba qurxinta darbiga hal-abuurka ah ayaa toosay ...